Edere site Tranquillus | Jan 11, 2019 | Edere ederede na nkwupụta okwu ọnụ
Email ụlọ ọrụ
Na gburugburu azụmahịa nke taa ebe email aghọwo ngwa nzikọrịta ozi kacha amasị. Ọ dị mkpa ịmụta nkà ndị dị mkpa iji zipu ozi gị. Enwere ọtụtụ ụzọ isi gwa onye gị na ya na-arụkọ ọrụ gị na-ese okwu n'ụzọ ụfọdụ iwe iwe gị. Anyị nwere ike iche n'echiche mkparịta ụka ihu na ihu, oku ekwentị ma ọ bụ ụdị ogbugbu. Agbanyeghị, email ka bụ otu n'ime ụzọ a na-ejikarị n'ụwa ọrụ.
Email bụ ngwá ọrụ dị ike nke ejiri mee ọtụtụ ihe.
Mgbe izipu ozi-e, enwere ndekọ na-akpaghị aka nke nkwukọrịta. Ya mere, a na-echekwa mgbanwe mgbanwe gị dị iche iche na nchekwa. Enwere ike iji ha mee ihe n'ọdịnihu maka ntụnye aka ma ọ bụ ihe gbasara iwu. Iji email dịka ụzọ nzikọrịta ozi gọọmentị na-echekwakwa ego azụmaahịa. Ọ dị mkpa iburu n'uche ihe ndị a iji ghọta otu ọ dị mkpa ka ị mara ụdị nzikọrịta ozi a.
N'ọrụ gị kwa ụbọchị, ọ nwere ike ime na onye ọrụ ibe chọrọ ihe ncheta nke ụfọdụ iwu nke omume ọma ị ga-enwe. Ọ dị mma icheta na ịkọrọ onye ọrụ ibe site na email bụ ụzọ dị mma na nke dị irè iji nweta isi okwu gị nke ọma. Ọ bụrụ na onye otu ahụ ekpebie ịghara ịgbanwe àgwà ya mgbe ịdọ aka ná ntị ugboro ugboro, enwere ike iwepụta ozi-e ndị i zipụrụ iji kwado imekwu ihe n'akụkụ gị. Cheta na echekwara ha na nchekwa na enwere ike weghachite ma jiri ya gosi akụkọ ọjọọ nke onye a na-ekwu okwu.
GỤỌ Kedu ụdị nkwanye ùgwù iziga ekele na email ọkachamara?
Tupu izi onye otu ibe ya ozi site na ozi-e
Dị ka e kwuru na mbụ, iji email maka nkwurịta okwu bụ nke nkịtị. Nke a na-egosi na ọ dị arọ karịa ịdọ aka ná ntị ọnụ ma na-ebute ọtụtụ nsonaazụ. Ya mere, tupu ị gwa onye gị na ya na-arụ ọrụ site na email, tụlee ịdọ aka ná ntị ọnụ. Ụfọdụ ga-agbanwe omume ha mgbe ị na-eme ya. N'ihi ya, ọ dịghị mkpa, n'ebughị ụzọ chọọ idozi nsogbu ahụ, inye ya oke na-enweghị isi. Ọzọkwa, ịkọrọ onye ọrụ ibe site na email nwere ike ọ gaghị abụ ụzọ kacha mma iji mee ka ha gbanwee. Na-emeso ikpe ọ bụla na nke ọ bụla dịka ọnọdụ ahụ si dị. Tupu gị ekwupụta iwe gị site na ozi-e, i kwesịrị ịma ka esi eme ya. Ịkwesịrị ịchịkọta echiche gị wee chọpụta ihe ịchọrọ ide na ọkwa mmetụta ị chọrọ iji nweta nsonaazụ achọrọ.
Ihe mbụ ị ga-eme tupu izipu email gị bụ ịchọpụta isi okwu na-ewe iwe gị. Ọ dịghị mfe dị ka ọ dị. N'ụlọ ọrụ ebe asọmpi na asọmpi na-achị, ị ghaghị ijide n'aka na ebubo gị nwere ihe ndabere siri ike. Ọ bụghị maka iji asịrị na-ata onye otu gị ahụhụ. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị bụ onye e merụrụ ma ọ bụ na-agba akaebe nke omume rụrụ arụ na eziokwu ahụ doro anya, mee ihe. Agbanyeghị, echefula na egwu gị ka ị kwanyere iwu nke nkwanye ugwu ugwu ugwu.
Ònye bụ onye gị na ya nwere nsogbu?
Ịmepụta esemokwu na-ekwesịghị ekwesị n'etiti gị na onye njikwa, dịka ọmụmaatụ, agaghị abara gị ma ọ bụ ndị otu gị uru ọ bụla. Nke a ga-emetụta arụmọrụ gị n'ezie ma nwee ike itinye gị n'ọnọdụ nnyapade. Kama ozi-e, ịtụle mkparịta ụka ihu na ihu nwere ike inye aka dị ka nzọụkwụ mbụ n'ịkwụsị nsogbu ị na-eche banyere ya. Agbanyeghị, ọ bụrụ n'ọtụtụ mkparịta ụka ihu na ihu na ịdọ aka ná ntị ọnụ gị ada, egbula oge izipu ozi ịntanetị gọọmentị nke ga-abara gị uru ma emechaa.
GỤỌ Lezienụ anya na ozi efu na igbe ozi gị
Lelee ozi email gị
Ekwesịrị ka edere email gị nke ọma. Mgbe ị na-ebute ụzọ ịkatọ omume ma ọ bụ ọrụ nke otu onye site na email, cheta na nke a bụ akwụkwọ gọọmentị. Nke a pụtara na ọ bụ akwụkwọ nwere ike ịtụgharị megide gị. Sọpụrụ iwu niile a tụrụ anya maka ide akwụkwọ ozi n'ọnọdụ a.
Jiri email ụlọ ọrụ January 11th, 2019Tranquillus
gara agaNcheta nke usoro cybercourtoisie
-esonụIhe ị chọrọ ịma banyere ịghara